Asa soratra : Boky voalohany mirakitra tononkalo amin’ny fiteny tavaratra -
AccueilVaovao SamihafaAsa soratra : Boky voalohany mirakitra tononkalo amin’ny fiteny tavaratra
Asa soratra : Boky voalohany mirakitra tononkalo amin’ny fiteny tavaratra
19/07/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Raha amin’ny fiteny malagasy ofisialy matetika no hiangaliana ireo tononkalo samihafa, dia efa miha mahazo vahana amin’izao fotoana ireo fitenim-paritra. Iray amin’ireo asa soratra vita boky ny « taratasin’i zaman’i Jao », boky tononkalo voalohany amin’ny fiteny tavaratra. Tononkalo 20 sangan’asan’i Momo Jaomanonga no voarakitra ao anatin’io boky 76 pejy io. Raha mahazatra antsika hatramin’izay ny fiantsana tononkalo amin’ny fomba milantolanto,dia mety hivoaka amin’izay ny fiangaliana ireo tononkalo ao anatin’io boky io. fa mety hoe mitsatotsatoka koa. Mahatsikaiky indrindra ary mety mampalahelo koa », hoy ity mpanoratra ity raha namintina ny votoatin’ny boky. « Ao ihany koa ireo filazana amin’ny fomba mivantana mifanila amin’ny fampiasana sarinteny. Tsotra ny sasany fa misy hevi-dalina ny hafa », hoy ihany izy.
Mampiavaka ny sangan’asan’i Momo Jaomanonga ny halavan’ny tononkalony, satria saika mihoatra ny andininy folo izy ireo. Toa izany koa ny fomba fanoratra izay mitondra hafatra mampieritreritra sy mahatonga saina, tsy mihambahamba ihany koa manitsy ireo diso lalana… Voaresany ao anatin’ireo tononkalo ireo ny lafin-javatra maro toa ny fandrosoana, politika, adim-piainana… Mampiavaka an’i Momo Jaomanonga ihany koa ny fitondrana hafatra ho an’ny Malagasy na dia mila ravinahitra any amin’ny Nosy Mayotte aza izy. Voatantarany ao anatin’ny tononkalony ihany koa ny lalam-piainany raha niainga teto Madagasikara nihazo an’i Mayotte, ary niainga avy any ny taratasy ho an’ny fianakaviany amin’ny lalan’ireo tontonkalo ireo.
Hisy ny hetsika hampahafantarany io boky io any Mayotte ny 20 jolay izao.
Tsy nomen’ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena hanatevina ny ekipa nasionaly lehilahy, hiatrika ny Afrobasket 3×3 hatramin’ny farany i Elly Randriamampionona. Marihina anefa fa ity mpilalao ity no andry iankinan’ny ekipam-pirenena. Fanamparam-pahefana diso tafahoatra. Tsy nilefitra ...Tohiny